Iyini intela yabavakashi futhi isetshenziswa kuphi eYurophu? | Izindaba Zokuhamba
Iyini intela yabavakashi futhi isetshenziswa kuphi eYurophu?
Maria | | Izaziso, travel
Phakathi nenyanga kaJulayi, iBarcelona ivume intela entsha yabavakashi yokuvakasha, ezongezwa kulabo asebevele befaka izicelo ezikhungweni zamahhotela nakwezokuvakasha. Noma kungenxa yemizamo yomkhandlu wedolobha yokuvikela iCondal City ekuminyaneni kwezivakashi noma ngenxa yesifiso sokuqoqa imali, iqiniso ukuthi bazama ukwamukela izindlela zokuvakasha ezinesibopho, njengoba nje uhulumeni wasekhaya waseVenice ezoya lawula ukufinyelela eSt.Mark's Square kusuka ngo-2018.
Kepha intela okuthiwa izivakashi ibathinta kanjani abavakashi? Lapho sikhokhela amaholide ethu singazithola ku-invoyisi yokugcina ngenani eliphakeme ngenxa yalesi silinganiso. Ungaphuthelwa okuthunyelwe okulandelayo lapho sizokhuluma khona ngokuthi intela yezokuvakasha iyini, kungani isebenza nokuthi yiziphi izindawo ezibandakanya lokho.
IBarcelona noma iVenice akuwona kuphela amadolobha aseYurophu asebenzisa intela yabavakashi. Ezindaweni eziningi emhlabeni wonke sezivele zisetshenzisiwe, njengeBrussels, iRoma, iBalearic Islands, iParis noma iLisbon.
1 Iyini intela yabavakashi?
2 Kungani kufanele sikhokhe intela yezivakashi?
3 Amanani ezivakashi ngokuningiliziwe
3.1 Izintela zomoya
3.2 Imali yokuhlala ngayinye
3.3 Izintela zabavakashi eYurophu
3.3.2 Amanye amazwe aseYurophu
Iyini intela yabavakashi?
Kuyintela umuntu ngamunye ohamba ngayo okufanele ayikhokhe lapho evakashela izwe noma idolobha elithile. Le ntela ivame ukukhokhiswa lapho ubhuka ithikithi lendiza noma lapho uhlala khona, noma kunamanye amafomula.
Kungani kufanele sikhokhe intela yezivakashi?
Imikhandlu yedolobha kanye nohulumeni basebenzisa intela yabavakashi ukuze babe nesikhwama esenzelwe izindlela zokukhuthaza ukwakhiwa kwengqalasizinda nemisebenzi, intuthuko kanye nokulondolozwa. Ngamanye amagama, ukongiwa kwamagugu, imisebenzi yokubuyiselwa, ukusimama, njll. Ngamafuphi, intela yabavakashi iyintela okufanele iguqulwe kahle edolobheni elihanjelwayo.
Amanani ezivakashi ngokuningiliziwe
Uma ubhukha indiza, inkampani yezindiza isikhokhisa uchungechunge lwemali ukukhokhela izindleko zokuphepha nophethiloli. Imvamisa zifakwa entengweni yokugcina yethikithi bese intela ukusetshenziswa kwezikhungo zezindiza kanye nokuthuthwa komoya.
Ngakolunye uhlangothi, kunenye intela esetshenziswa kubahambi abashiya izwe. Zaziwa njengezimali zokuphuma futhi zisetshenziswa emazweni afana neMexico, Thailand noma Costa Rica.
Imali yokuhlala ngayinye
Le ntela yabavakashi ikhokhiswa ukuhlala emahhotela nasezindlini zokuvakasha (kufaka phakathi amakhaya okusetshenziswa amaholide) futhi yehliswa ngaphakathi komthethosivivinywa wehhotela noma ikhokhiswa ngokwehlukana, yize noma kunjalo ingaphansi kwe-VAT (isilinganiso esincishisiwe esingu-10%). Izikhungo zabavakashi ziyayiqoqa bese ziyikhokha njalo ngekota ne-ejensi yentela ehambisanayo.
ESpain, umphakathi ngamunye ozimele unemithetho yawo maqondana nentela yezokuvakasha, kepha aqondana nokwabela ukuqoqwa esikhwameni sezokuvakasha okusimeme.e evumela ukuvikelwa, ukunakekelwa kanye nokukhuthazwa kwempahla yabavakashi nengqalasizinda edingekayo ukuze zisetshenziswe. Ngamafuphi, zisetshenziselwa ukunikeza impendulo nokukhulisa umkhakha.
Izintela zabavakashi eYurophu
ESpain okwamanje kukhokhwa intela yabavakashi kuphela eCatalonia naseziQhingini zaseBalearic. Emphakathini wokuqala, kusetshenziswa emahhotela, ezindlini, ezindlini zasemakhaya, ezinkanjini nasezindaweni zokuvakasha. Inani lihluka phakathi kuka-0,46 no-2,25 euros umuntu ngamunye ngosuku kuye ngendawo yokusungulwa nesigaba sayo.
Emphakathini wesibili, intela yabavakashi isebenza emikhunjini ehamba ngezikebhe, amahhotela, amahostela nezindawo zokuhlala izivakashi. Intela ibiza phakathi kuka-0,25 no-2 euros isivakashi ngasinye nobusuku ngokuya ngesigaba sokuhlala. Ngenkathi ephansi izinga liyancipha, kanye nokuhlala isikhathi eside kunezinsuku eziyisishiyagalombili.
Ngaphezu kwengxenye yamazwe aseYurophu asevele ayisebenzisa intela yabavakashi ukukhuthaza lo mkhakha. Ezinye zazo zingokulandelayo:
IRoma: Kumahhotela ezinkanyezi ezi-4 no-5 ukhokha ama-euro ama-3 ngenkathi kwezinye izigaba ukhokha ama-euro ama-2 umuntu ngamunye nobusuku. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi ubudala akudingeki zikhokhe le mali.
IMilan neFlorence: Intela yezivakashi engu-1 euro umuntu nobusuku isetshenziselwa inkanyezi ngayinye ehhotela elinayo.
IVenice: Inani lentela yabavakashi liyahluka ngokuya ngesizini, indawo lapho ihhotela likhona nesigaba salo. Ngenkathi ephakeme i-euro engu-1 ubusuku ngabunye nenkanyezi kukhokhiswa esiqhingini saseVenice.
Intela yabavakashi eFrance isebenza ezweni lonke futhi yehluka phakathi kwama-euro angu-0,20 no-4,40 kuya ngesigaba sehhotela noma intengo yamakamelo. Isibonelo, i-2% eyengeziwe ikhokhiselwa ukuhlala okuntengo idlula ama-euro angama-200.
Intela yabavakashi eBelgium incike edolobhaneni nasemkhakheni wokusungulwa. EBrussels iphakeme kunakwelinye izwe futhi ibanga eliphakathi kwama-2,15 euros amahhotela ezinkanyezi ezi-1 nama-euro angama-8 ngamahhotela ezinkanyezi ezi-5, igumbi ngalinye nobusuku ngabunye.
Enhlokodolobha, iLisbon, intela yabavakashi iyi-1 euro isivakashi ngasinye esihlala kunoma yiliphi ihhotela noma isikhungo. Kusebenza kuphela evikini lokuqala lokuhlala edolobheni. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-13 azikhokhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iyini intela yabavakashi futhi isetshenziswa kuphi eYurophu?
Vakashela izindawo ezahlukahlukene eSpain lapho kuqoshwe khona iGame of Thrones
Amabhishi ama-5 ahlanzekile eSpain okugeza